काे-राेना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन जाँदा के–के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ त ? पढ्नुहाेस् र जानकारि सेयर गर्नुहाेस् – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : काे-राेन भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन जाँदा के–के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ त ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले को-रोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन जाँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले खोप लगाउन जाँदा नागरिकता वा उमेर खुल्ने कुनै पनि सरकारी कागजात वा वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस अनिवार्य लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्था जान आग्रह गरेको छ । त्यस्तै अनिवार्य नाक, मुख छोपिने गरी मास्क लगाउन, स्यानिटाइजर साथमै बोक्न, खोप लगाउने बेला पनि मास्क लगाइरहने कुरामा ध्यान दिन मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै खोप लगाउन जाँदा छोटो बाहुला भएको अनि खुकुलो कपडा लगाएर जान र खोप लगाउने लाइनमा बस्दा दुई मिटरको भौतिक दुरी कायम राख्न मन्त्रालयको आग्रह छ । खोप लगाएपछि झन्डै आधा घण्टासम्म खोप केन्द्रमै बस्न र घर फर्किएपछि साबुनपानीले मिचिमिची हात धुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकामा आज देखि ६० देखि ६२ वर्ष उमेर समूह र उपत्यका बाहिर ६२ देखि ६४ उमेर समूहका नागरिकलाई खोप दिने भएको छ । ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिक चार लाखभन्दा धेरै छन् । उनीहरू सबैलाई चीनबाट आएको खोपले दोस्रो डोज दिन पनि पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चीनले केही दिनअघि अनुदानमा १० लाख डोज खोप पठाएको थियो । यसअघि पनि चीनले आठ लाख डोज खोप नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो । काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।
Prevविश्वकप छनोटबाट नेपाल बाहिरियो, एसिया कप छनोटमा यस्तो छ बाटो
Nextबौद्ध धर्मको विस्तार चीन, कोरिया र जापानमा